Why do you use Linux? | Calm Hill
Navigation Menu	Why do you use Linux?
Posted by CalmHill in ဆောင်းပါး, ထင်ရာမြင်ရာ GNU Linux
Jun.05 4	4 Comments
Shwe Gaung Pyaung	June 15, 2012 at 12:43 pm	လင်းနက် ဘာလို့သုံးသင့်တာလဲ မေးရင် သုံးရလွယ်တယ်လို့ ကျွန်တော် ဖြေပါမယ်။ ကွန်ပျူတာ သုံးတဲ့သူကို အဆင့် ၃ ခု ခွဲလိုက်ရင် အောက်ဆုံးအဆင့်မှာ ရှိသူက ဝင်းဒိုးကို မသုံးသင့်ပါဘူး။ များသောအားဖြင့် မိတ်ဆွေ၊ ဆွေမျိုးတွေမှာ တွေ့ရတာက update တွေ ပုံမှန် မလုပ်တာ၊ တွေ့သမျှ လိုက်နှိပ်ပြီး စက်ထဲ ဗိုင်းရပ်တွေ ဝင်နေတာ၊ ဗိုင်းရပ်မဝင်တောင် startup မှာ ဆော့ဝဲစုံ ဘင်ခရာတီးပြီး တက်လာတာ။ ဘာမှန်း မသိတာတွေနဲ့ စက်အကောင်းစားက စက်အစုတ်လေးထက်စာရင် နှေးကုန်တာ အများကြီးပါ။ browser ဆိုလဲ toolbars အစုံနဲ့ လှေခါးထစ် စိုက်ခင်း စိုက်လို့ ရပါတယ်။ သူတို့ကို လင်းနက် သုံးဖို့ သင်ပေးရ ပိုလွယ်ပြီး ပြဿနာလဲ တော်တော် ကင်းပါတယ်။ (ကိုယ်တွေ့ပါ)
ခက်ခဲတာက အလယ်အလတ်တန်း ကွန်ပျူတာ အသုံးပြုသူတွေ။ ဘူးဆို ဖရုံမသီးဘူး။ Microsoft Office မရဘူး။ Photoshop မရဘူးသာ အော်နေတာ။ တကယ်တန်း စာစီစာရိုက်ဆိုလဲ notepad နဲ့တင် ပြီးတဲ့ကိစ္စမျိုး လုပ်ကြတာ။ Photoshop ဆို မဖွင့်တာတောင် ကြာပေါ့။ ဝင်းဒိုးဆော့ဝဲက ပိုကောင်းတယ် အော်နေကြပေမဲ့ တကယ်တမ်းက ဘာမှ အသုံးချတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အများဆုံး သုံးကြတာကတော့ ဂိမ်းနဲ့ မီဒီယာပေါ့။ ပြီးတော့ အဲဒီသူတွေ လင်းနက်သုံးရင် ပိုဆိုးတာက ပြဿနာ တသီတသန်း။ စက်ချင်းတူတောင် ကျွန်တော့် ဦးလေးမှာ မဖြစ်တဲ့ ပြဿနာ သူ့မှာ ဖြစ်နေတယ်တဲ့။ သေချာမေးလိုက်ရင် ဟိုဟာလိုလို ဒီဟာလိုလိုနဲ့ သူမှားလုပ်ထားတာ ရှောင်ပြောတယ်။ အဲလို လူမျိုးကတော့ လင်းနက် သုံးဖို့ မတိုက်တွန်းပါဘူး။ ဝင်းဒိုးနဲ့ အဆင်ပြေရင်လဲ ပြီးတာပါပဲ။ ပြဿနာဖြစ်ရင်တော့ ကျွန်တော်တို့လဲ မသုံးတာမျိုးဆို (IDM crack ပြဿနာမျိုး) ခေါင်းရှောင်နေမိမှာပါပဲ။ အားလုံးက ကောင်းကွက်၊ ဆိုးကွက် ၂ ခု လုံး ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော့်အမြင် လင်းနက်က ပိုသုံးရလွယ်သလားလို့။ ကျွန်တော်တော့ ၂ ခုလုံး သုံးပါတယ်။
Reply	CalmHill	June 15, 2012 at 2:39 pm	အင်း သုံးလို့လွယ်လို့ သုံးခိုင်းတယ်ဆိုတာလည်း ကောင်းတဲ့အဖြေဖြစ်သလို သင့်လျော်တဲ့ အကြံပေးချက်ပဲ။ အဲဒါကျတော့ Linux သုံးတယ်လို့ ပြောရမယ်ဆိုတာထက် Windows, Mac, Gnome, KDE, XFCE စသည်ဖြင့် သုံးတယ်လို့ပဲ ပြောရတော့မယ် ဘယ်ဟာပိုလွယ်လဲဆိုတာက သုံးတဲ့လူတွေ အပေါ်မူတည်မယ်။ ထည့်ချင်ရာထည့် လျှောက်ထည့်လို့ စက်ထဲမှာ မလိုတာတွေဝင်သွား အဲဒါကျတော့ သုံးရလွယ်တာ မလွယ်တာနဲ့ မဆိုင်ဘူးထင်တယ် ကိုယ့်ကိုလာပြီး ထပ်ဒုက္ခပေးနိုင်ခြေ နည်းတယ်လို့ ဆိုလိုမယ်ထင်တယ်။ ဒါလည်း ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ် သူငယ်ချင်းတွေ ဆွေမျိုးတွေက ပြင်မရတဲ့ စက်အစုတ်တွေသယ်လာ စက်လိုက်ဝယ်ပေး ပြောတဲ့လူကရှိတယ် ကိုယ်လိုက်ဝယ်လို့ပျက်ရင် ကိုယ့်အပြစ်လိုလို ဖြစ်တတ်သေးတယ် အဲဒါတွေစိတ်ညစ်ရတာလည်း ဒုက္ခတစ်မျိုးပဲ။
Reply	reader	June 21, 2012 at 2:55 am	I use it for stability, security and customiziblity(eye candy stuffs neither Win nor OSX can provide, compiz, endless themes), also multiple dektops are out of the box in Linux.
A choice of DE, even it means for the sake of it(KDE, Gnome(for me I m die hard Gnome 2x fan-never like Gnome3, Unity, still reluctant about Mate / Cinnamon), for lightweight DE there are alsoalot such as XFCE and LXDE which I really like after Gnome 2x. I do use and like both APT/Yum or deb/rpm, but finds apt is faster handling.
It provides me as learning platform, I do minimal programming exceptabit of python, occasionally compiling C when learning about security(well ok compiling exploit codes,
whether they do work or not, it is really fun).
Also Linux is indispensable as I found out doing serious study about TCP/IP and all these network stacks.Wine is also enjoyable to use even testing random Windows binaries, again just for fun.Onaserious side I try to run/configure and set up CMS like drupal and running sites, learn about security things such as iptables, SELinux and traffic analysis.
I am also into Virtualization and again Linux provides an excellent platform for learning. A lot of proprirateory bare metal hypervisior seems to use/based or Linux kernel or more specific RHEL variants. Lately I was trying Parallel Baremetal hypervisor and sure enough, and the familiar anaconda installer of RH comes up. I think same with. Citrix, Xen or KVM that they all use Linux kernel.
I am technically inclined user and I do feel such great feeling when old timers talk about their golden days and joys of using systems such as Atari, Comoredore or Amiga. I felt te same way since I familiar and seriously using Linux, actually I started out with Windows 3.11 and never felt that excitement or joy.
Testing out different Distros is also fun, sometime really interesting things comes up apart from usual updates. I still hadalot to learn or enjoy, have not really dig into Gentoo/Arch, but looking forward into it. LFS is not yet in the near future as they say it is only for ‘Terminably Insane’, just need to find more spare time. BSD, Solaris and QNX are on my radar as well, so far only tested in VM, if I haveaspare machine I really want to spin them on real hardware.
I can continue on but it is quite long already that I love Linux and family for all those technical reasons, it never fails to provide features as much as I could have wanted the same time beingagreat educational platform.
For end-users, in my opinion it could be great system, but when something wrong, and they need to dive into command line, that is whereadistaste start and going back where they used before or giving up. But I never quite understand how Apple made it with Unix/BSD core and people are wanting more and more. Is it high quality hardware or Apple’s magic I wonder, because to me it is BSD variant with high quality hardware, and some x-factor? I can swing around in OSX terminal as I do in Linux, the technical satisfaction about the same, but I do not want to pay the premium price while I can have the almost same thing with Linux.
I do agree that underlying OS are not important anymore (for normal users Browser is all they need), but I think we need or always in need ofaproper workstation and systems like Linux for any serious kind of work or study. Also CS students should use as much as *nix because in my humble opinion no other system provides or facilitates the necessity, greatness and utilization of serious computing tools than any given mainstream *nix. Maybe if and when they see, our government can be utilized all these opensource systems in their proper IT infrastructure. I am not really into philosophical/ideological side arguments of opensource programs and Oses but I do strongly believe that it had technological, financial orabusiness edge when squeeze into last drops.
Also educational sector being no doubt will benefit from it. At least it can sharpen the technical skills in any fields, be it mathematics, natural sciences or engineering and of course computing.
All the way from primary to tertiary, there’s always something for any group. Eg. KDE educaional packages toastatistics package like R.
Reply	CalmHill	June 21, 2012 at 11:47 am	အင်း ရေးထားတာက အရှည်ကြီးပဲ အခုလို ကိုယ်တိုင် ဘာလို့သုံးသလဲ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရင် ကောင်းပါတယ် မလိုအပ်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေ ပြောပြီးတော့ လူသုံးဖို့တိုက်တွန်းနေတာ မြင်မြင်နေရလို့ အပေါ်ကစာက ရေးထားတာ